TSY NATERAKY NY NOFO IHANY FA NATERAK’ANDRIAMANITRA! – filazantsaramada
TSY NATERAKY NY NOFO IHANY FA NATERAK’ANDRIAMANITRA!
Publié parfilazantsaramada	 janvier 16, 2015 Laisser un commentaire sur TSY NATERAKY NY NOFO IHANY FA NATERAK’ANDRIAMANITRA!
« Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny Anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon’ny nofo, na ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra. » Jaona 1:12-13
Teny iray azo avahana tsara eto ny teny hoe « nandray »ary azo raisina sary antsaina koa ny tanana mitsotra, manambara ny fanekena ny zavatra izay atolotra. Toa tsotra ihany izany raha heverina fa indraindray dia sarotra ny manatanteraka azy! Raha dinihina tokoa ny andinintsoratra masina eo alohan’izao dia ny hoe: « tonga tany amin’ny Azy Izy fa ny Azy tsy nandray Azy. » izany hoe olona tokony handray tsara izao nefa tsy nandray.
Inona anefa ilay zavatra atolotra?
Ny zavatra atolotra eto dia ny Teny, na koa ny Mazava. Ny fanambarana ery aloha dia milaza fa Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary Izy dia Andriamanitra (ny Teny dia Andriamanitra), ary ny Teny dia tonga nofo. Tonga teo amin’ny Jiosy izay firenena voafidy Izy fa ny Jiosy tsy nandray Azy (ny jiosy no nanombo Azy tamin’ny hazo fijaliana). Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra.
Iza no azo ateraka?
Tsy voalaza eto na zaza na olon-dehibe ihany no azo ateraka. Ny zaza ve afaka mandray ny Teny? Ny amin’ny maha-zaza ny zaza dia izay atolotra azy dia raisiny avokoa. Tsy manana saina afaka handà akory izy, marina fa nateraky ny nofo ka dia nofo, nefa izy manana ny toetra manaiky izay tsy ananan’ny lehibe! Koa raha omena ny teny izy dia manaiky. Izay atolotry ny ray aman-dreniny azy dia ekeny! Ny lehibe dia manana ny safidiny: afaka mandray ny avy amin’Andriamanitra nefa afaka mandray ny avy amin’i Satana koa! Izay mandray ny Teny no aterak’Andriamanitra! Ny mahagaga dia izay voalaza ao amin’ny Ezekiela 37 ny amin’ireo taolana marobe nomena ny Teny ary dia nanomboka nihetsika, ary nifanatona, ary naniry nofo, dia velona. Izany no herin’ny Teny tonga nofo! manangana ny maty efa taolana aza vitany, tsy afaka hiteraka antsika ho zanak’Andriamanitra koa ve izany Teny izany. Izaho sy ianao, efa maty noho ny ratsy efa vitantsika, moa va tsy afaka hanangana antsika amin’ny maty koa va ny Teny? Hoy ny teniny amintsika: miverena amiko fa efa nanavotra anao aho.
Ny Tompo Jesosy hampahery antsika!
Publié parfilazantsaramada janvier 16, 2015 Publié dansUncategorized
Programan’asa mikasika ny Tanora
TSY HIFANDITRA NA HIANTSO MAFY IZY…….